Edith Wharton, mumwe wevanonyanya kukosha vanyori vekuAmerica | Zvazvino Zvinyorwa
Edith Wharton anoonekwa nevakawanda kuve mumwe wevanonyanya kukosha vanyori venhau vekuAmerica. Munyori ane zvinyorwa zvinopfuura makumi mana, nhoroondo yehupenyu uye dzimwe nyaya pfupi kune chikwereti chake; kunyangwe mamwe mabhuku ekunyora kwake akaburitswa post-mortem. Wharton ainyanya kuve akazvipira mukugadzira zvinyorwa uye nyaya pfupi, asi ainyorawo mabhuku mune dzimwe nzvimbo senge: kushongedza uye kufamba.
Hupenyu hwakawanda hwaEdith Wharton hwakapedzerwa muFrance, hwaakatora semusha wake wechipiri. Neichi chikonzero, mazhinji emabhuku ake ari muChirungu neFrench. Muna 1921, munyori wezvekunyora akaburitsa bhuku rake. Nguva Yekusachena iyo yaakakunda nayo Pulitzer Prize. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Wharton aive mukadzi wekutanga anonzi: Chiremba honoris causa neYale University.
1.3 Hukuru hushamwari
1.4 Wharton nehondo yenyika yekutanga
2 Edith Wharton basa rekunyora
3 Mamwe emabhuku akanakisa aEdith Wharton
3.1 Imba Yemufaro (1905)
3.2 Nguva Yekusachena (1920)
3.3 Kutarisa kumashure (1934)
Edith Newbold Jones akaberekwa muna Ndira 24, 1862, muNew York City. Vabereki vake vaive: George Frederic Jones naLucretia Stevens Rhinelander. Kutenda kumagariro uye hupfumi hwemhuri yake, Edith akadzidziswa pamba, aine varairidzi vakanaka kwazvo. Pamusoro pe, Akagara zvachose kuwana raibhurari hombe, iyo yaakanyanya kushandisa, sezvo aigara achida kuverenga.
Muna 1885, Edith akaroora Edward Robbins Wharton, hukama uhwu hwaive hwakapenga, kuchikanganisa muzvinhu zvakawanda. Pakupedzisira, muna 1913 - atove nemakore makumi maviri nemasere ekuberekwa - Edith akakwanisa kuparadzana zviri pamutemo naEdward, mushure menguva yakareba yekusafara uye kusatendeka kwakawanda kubva kumurume wake.
Kumwe kwekufarira kwaEdith kwaifamba, pamwe nekuti anga achizviita nevabereki vake kubvira aine makore matatu. Akauya kuyambuka Atlantic nguva dzinokwana makumi matanhatu neshanu, sezvo nzendo dzake muEurope dzese dzaingove. Akafamba nguva zhinji zvekuti akatorarama kwenguva yakareba mukondinendi yakare kupfuura kumusha kwake. Uye izvi hazvishamise, nekuti hupenyu muNew York hwaidhura.
Zvimwe chete Edith anosimbisa muhupenyu hwake nzvimbo dzakanaka dzaanoziva pasi rese. Pakati penzvimbo dzakanyanya kumukanganisa ndiCamino de Santiago uye Pórtico de la Gloria yeCathedral yeSantiago; aizviona sechimwe chezvishamiso uye zvakaisvonaka pane zvese.
Chimwe chezvinhu Edith Wharton anozivikanwa nacho hushamwari hwake neakakosha manhamba enguva. Mumwe wavo aive munyori uye mutsoropodzi wezvinyorwa Henry James, uyo waakatsaurira chitsauko chose muhupenyu hwake. Iye, pamusoro pekuve shamwari yake, aive chipangamazano wake. Dzimwe shamwari dzaEdith dzaive: Theodotre Roosvelt, Jean Coteau, Sinclair Lewis, F. Scott Fitzgerald, naErnest Hemingway.
Wharton nehondo yenyika yekutanga
Payakatanga la Hondo Yenyika Yokutanga, Edith Wharton aive paRue de Varenne, muParis. Chinhu chekutanga chakaitwa nemunyori kushandisa simba rake muhurumende yeFrance kumutendera kuti afambe nemudhudhudhu kumberi, nechinangwa chekutakura zvekurapa pamwe nekushandira pamwe pazvinodiwa.
Nenzira imwecheteyo, akawana kushongedzwa kweMuchinjikwa weLegion of Honor nehurumende yeFrance, izvi nekuda kwebasa rake muRed Cross uye nebasa rake rakakosha rezvemagariro. Zvese izvi zviitiko zvakatorwa nemunyori mumwechete muzvinyorwa zvakasiyana, idzo dzakazoburitswa murondedzero Kurwisa France: Kubva kuDunkerque kuenda kuBelfort (1915).
Edith Wharton akafa ava nemakore makumi manomwe nemashanu, musi waAugust 75, 11 muSaint-Brice-sous-Forêt munyika dzeParis. Rufu urwu rwaikonzerwa nenjodzi yemoyo. Marara ake anozorora muvhu rinoyera reGonards muVersailles.
Edith Wharton basa rekunyora
Chinyoreso chemunyori anoshamisa ichi chakaburitsa muunganidzwa wakakura wemabasa, aine akawanda mabhuku, nyaya, matanda ekufamba uye nhetembo. Wharton aive nemhando yakasarudzika uye yakasarudzika, yakatsanangurwa nematanho ake nemapoka epamusoro enharaunda, kunyangwe uchiuya uchibva ipapo. Basa rekutanga iro raakazivikanwa ndere Mupata weSarudzo (Mupata weChisarudzo, 1902).
Mu 1905 yakabudiswa: Imba yemufaro (Iyo Imba yeMufaro), nhoroondo yakaita kuti awane mukurumbira. Saka zvakatanga kuna Edith Wharton nguva yakawandisa mukugadzirwa kwemabhuku akanaka, akadai se: Chibereko cheMuti (1907), Madame de Treymes (1907), Ethan Frome (1911), kusvika kubudirira kwake kukuru muna 1920: Nguva Yekusachena, yaakakunda iyo mubairo Pulitzer.
Mamwe emabhuku akanakisa aEdith Wharton
Imba yemufaro (1905)
Iyo inoverengeka yakaiswa pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri muNew York. Iyo nyaya ye Lily bart, akadzidza, akangwara uye akanaka kwazvo mukadzi weNew York, aive nherera aine makore gumi nemapfumbamwe. Makumi gumi gare gare haana kuroora uye achiri kugara natete vake, avo vakamuchengeta kubva pakafa amai vake. Chinangwa chikuru chaLily kugara munharaunda yepamusoro, kunyangwe akaita sarudzo dzakaipa kuita kudaro.
Mukufamba kwake anodanana negweta rine mukurumbira Lawrence Selden, asiri mupfumi uye ndosaka asina kumbobvuma rudo rwake kwaari, kunyangwe hazvo achitsiva. Kuwana izvo zvaanoda zvichave zvakaoma, chimwe chezvikonzero chiri nekuda kwemukurumbira wakashata uyo Bertha Dorset anovakira iye, mushure mekumupomera kuti ane hukama nemurume wake. Zvese zvinotungamira Lily kusurukirwa, akamirira chimwe chinhu chisina kumbouya.
Nguva Yekusachena (1920)
Sezvakataurwa, zita iri rakamupa iye Pulitzer Prize. Iyi inova inyaya yerudo inoenderana netriangle yerudo inoitika muNew York, mugore ra1870. Mukuvandudzika kwechirongwa, hupfumi uye tsika dzakatarwa dzemagariro enzvimbo panguva zvinotsanangurwa zvakadzama. Vatambi vake vakuru ndiNewland Archer - gweta -, mukadzi wake May Welland, uye hama yake, Countess Olenska.
acha Ndiye murume akatarisisa uyo asingade kudzokorora mbiri yeakajairika varume venguva, vasingatendi nevanyengeri. Iye akatendeka kumisimboti yake uye anotsoropodza tsika dzenzanga yepamusoro.; Aigara achiratidza ruremekedzo kuna Chivabvu, kusvikira zuva rakadzoka Olenska, uye kuvapo kwake kuri nyore kwakaita kuti murume afunge manzwiro ake. Aya ndiwo mabudiro achaita nyaya inobata pazvinhu zvakaomarara zvenguva iyoyo uye izvo zvinopera neshanduko dzisingatarisirwe.
Kutarisa kumashure (1934)
Muna 1934, Edith Wharton akaburitsa nhoroondo yake yeupenyu. Mune basa iye anoziva kuti akararama kuzere uye inotsanangura zvakadzama hudiki hwake, hudiki uye kukura (kunze kwekunge zvine hukama nemuchato wake). Munyori anotaurira maitiro aakaita zvese zvaaifarira: kuverenga, kunyora, kufamba uye basa rezvemagariro. Uye zvakare, akaziva kukosha kwekushongedza muhupenyu hwake.
Nzvimbo yekunyora muhupenyu hwaWharton inotora poindi yakakosha muhupenyu hwake. Kujekeswa kwemabasa avo uye kurudziro yakavatungamira kuti vagadzire zvinotsanangurwa. Pamusoro pe, inotaura nezve zvakaitika kwaari muWWI nekubatana kwaakapa kune vazhinji vanoshaya. Imwe poindi yekusimbisa mukati memusoro wenyaya ishamwari dzakanaka uye dzakanaka dzaive naEdith Wharton munguva yekuvapo kwake, kwaari waakatsaurira chikamu chakakosha chebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Edith wharton